DEG-DEG: Jadon Sancho Oo Ka Baxay Aamusnaanta, Kana Hadlay Cunsuriyaddii Lagula Kacay & Rikoodhihii Uu Lumiyey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Jadon Sancho Oo Ka Baxay Aamusnaanta, Kana Hadlay Cunsuriyaddii Lagula Kacay & Rikoodhihii Uu Lumiyey
DEG-DEG: Jadon Sancho Oo Ka Baxay Aamusnaanta, Kana Hadlay Cunsuriyaddii Lagula Kacay & Rikoodhihii Uu Lumiyey
Xiddiga reer England ee Jadon Sancho ayaa ugu dambayn ka baxay aamusnaanta, kana hadlay rikoodhihii uu ka khasaariyey xulka Ingiriiska finalkii Euro 2020, cunsuriyaddii iyo caydii loo geystay, kuwaas oo dhamaantood ka dhashay kubadda uu goolka la seegay.
Jadon Sancho ayaa raalligelin u diray ciyaartoyda xulka dalkiisa iyo taageereyaasha, xilli isaga, Bukayo Saka iyo Marcus Rashford ay dhibbaneyaal u yihiin farriimo cunsuriyad ah oo loogu soo dirayo baraha bulshada.
Saxeexa cusub ee Manchester United ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee Instagram, waxa uu ku sheegay in uu dareemayo in uu dalkiisa hoos u dhigay, walina uu ku jiro dareen aan fiicnayn tan iyo maalintii uu khasaariyey rikoodhaha.
Qoraalka ayuu Sancho ku yidhi: “Waxa aan qaatay dhawr maalmood oo ka dambeeyey finalkii Axaddii, walina waxa aan kujiraa dareen isku qasan. Waxa aan doonayaa in aan raallgeiyo ciyaartoyda, shaqaalaha tababarka iyo dhamaan taageereyaasha aan hoosta u dhigay.”
Jadon Sancho oo bartiisa Instagram ay ku xidhan yihiin in ka badan 6 milyan oo qof, ayaa waxa uu intaa ku daray: “Kani waa dareenkii iigu xumaa ee aan muddo dheer dareemo, xataa wayadag tahay in aan ereyo ku cabbiro dareenkayga dhabta ah, laakiin waxa jira waxyaabo togan oo laga qaadan karo tartankan inkasta oo gool-darru ay tahay dhaawac muddo dheer ah.
“Fikirayka ka hor inta aanan ciyaarna gelin, waxa uu mar walba ahaa ‘sideen u caawin karayaa kooxdayda?, sidee ayaan gool ugu samayn karayaa? sidee ayaan gool ugu dhalin karayaa? sidee ayaan fursado u samayn karayaa? Waxa dhabta ah ee aan doonayay in aan sameeyo markii aan rikoodhaha laadayayna wuxuu ahaa in aan kooxda caawiyo.”
Waxa kale oo uu Jadon Sancho soo qaaday cunsuriyadda lagula kacay, waxaanu yidhi: “Iskama dhigayo mid aan arag cunsuriyadda lagula kacay aniga iyo walaalladay Marcus iyo Bukayo ciyaarta kaddib, laakiin waa wax laga murugoodo inkasta oo aanay wax cusub ahayn.”